Safaarada Soomaaliya Ee Dalka Koonfur Afrika Oo Joojisay Shaqadii Safaarada - Radio Simba 95.0 MHZ - Simbanews - Idaacada Simba
Qaar kamid ah ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa waxa ay ku eedeeyeen safaarada soomaaliya ee dalka koonfurka aysan u qaban adeegyadii ay uga baahnaayeen ,waxaana ay dalbadeen in masuuliyiinta safaarada lala hadlao ama la badlo.
mid ka mid muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsata dalka koonfur afrika oo la hadlay idaacada simba ayaa waxa uu sheegay in ay dhibaatooyin dhowr ah ay ka tirsanaayaan safaadara islamarkaasna shaqadeedu ay aad u liidato.
Waxaana uu xusay in waxyaabaha ay uga baahnaayeen safaarada oo aysan uqaban ay ka mid yihiin in dadkii soomaaliyeed ee hantidooda la dhacay aysan waxba uqan in aysan qareen ama qof udooda u qaban marka qof muwaadin soomaaliyeed lagu dilo gudaha dalka koonfur afrika.
Dhanakale Safiir ku-xigeenka ahna Lataliyaha koowaad Safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika, Mudane Cabdalla Cali oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in laga bilaabo maanta ay Safaaradda hakin doonto howlaheeda ay u heysay muwaadiniinteeda.
Mudane Cabdalla ayaa intaasi ku daray in uu heer sare marayo faafitaanka cudurka COVID-19, sidaa darteed ay Safaaradda xirnaan doonto 14 cisho.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ayuu kula dardaarmay inay muujiyaan feejignaan dheeri ah, maadama uu cudurka badanayo faafitaankiisa.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si maalinle ah u geeriyooda cudurka COVID-19, ayadoo uu khudbad uu jeediyey xalay Madaxweynaha dalkaasi, kaasi oo sheegay in uu dalkiisa dhawaan bilaabay tallaalka cudurkan.